Mpively olona amin’ny tavoahangy… : nidoboka am-ponja i Black sy i Lava | NewsMada
Mpively olona amin’ny tavoahangy… : nidoboka am-ponja i Black sy i Lava
Saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany etsy Analakely, ny faran’ny herinandro teo teny Soarano i Black, 23 taona sy i Lava, 26 taona. Araka ny fanazavan’ny polisy, jiolahy raindahiny amin’ny fanaovana sinto-mahery sy fanendahana amin’iny faritra iny izy roa lahy ireto. Teo am-panaovana ny asa ratsiny izy roa lahy ireo no nifanehatra tamin’ny polisy. Olona iray no niharan’ny asa ratsin’izy ireo tamin’io fotoana io. Novelesin’izy ireo tamin’ny tavoahangy ilay olona nendahiny ka torana tsy nahatsiaro tena. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny kitapo nisy vola sy antontan-taratasy maromaro ary finday.
Tratran’ny polisy nanao fisafoana teo am-pizarana ny vola azony ry zalahy ka raikitra ny fifanenjehana. Noraisim-potsiny ry zalahy taorian’izay. Niaiky ny heloka vitany izy ireo nandritra ny famotoran’ny polisy.
Maro ireo nitondra faisana tamin’ny afitsok’ireto jiolahy ireto. Nidoboka eny amin’ny fonjan’Antanimora avy hatrany izy ireo rehefa avy natolotra ny fampanoavana. Tsikaritra fa somary maivamaivana ihany ny sazy azon’ny jiolahy tahaka itony ka miverina manohy ny asa ratsiny indray ry zalahy rehefa tafavoaka ny fonja.